kaydinta baradhada - majaladda "Nidaamka Baradhada"
Bogga guriga Calaamadda kaydinta baradhada
Calaamadda: kaydinta baradhada
Ururka Beeralayda Filibiin. Sii wad
Talaadada, waxaan sii wadeynaa inaan daabacno agab gaar ah oo ka socda WPC (Shirweynaha Baradhada Adduunka) ee ku saabsan abaabulka silsilad wax-soo-saar baradho ah oo hufan ...
Nidaamka biqilka ka hor ErFra ayaa ku soo laabtay wax soo saarka
ErFra VoorKiemSystem (VKS) ee Erik Juurlink iyo Frank Houtink ayaa loo soo bandhigay suuqa hal-abuurnimo sannadkii hore. Kani waa alwaax...
Soo saarista baradhada iyo kaydinta joogtada ah ee Afrika
Baradhada ayaa lagu daray nidaamka rasiidka bakhaarka Kenya
Kenya waxay ku dartay baradhada habka rasiidka bakhaarka (WRS). Nidaamkan waxaa horeyba ugu jiray galley, digir, digir cagaaran, qaxwo, ...
Kaydinta baradhada iyada oo aan biqlin
Mamnuucidda EU-da ee isticmaalka chlorprofam sida wakiilka ka-hortagga biqilka ee baradhada ayaa jirtay tan iyo sannadkii hore. Xaaladdan oo kale, Yurub ...
Dufcaddii ugu horreysay ee baradhada ayaa timid Sakhalin oo ka timid Kurile
Labaatankii tan oo baradho ah oo ka baxay Iturup ( Jasiiradaha Kuril) ayaa la geeyey Sakhalin. Iturup, oo caan ku ah kalluunka iyo caviar, laakiin gabi ahaanba ...
Kaydinta baradhada ee 40 kun oo tan ayaa laga dhisayaa Belarus
Xarunta cusub ee kaydinta baradhada ee beerta Diana (degmada Shklov, gobolka Mogilev) ayaa la dhisay iyadoo la adeegsanayo tignoolajiyada ugu horumarsan. Waxaa la dhisayaa iyadoo lagu xisaabtamayo horumarka wax soo saarka ee...
Kaydinta baradhada ee 16 kun oo tan ayaa lagu hawlgeliyay Ukraine
Kooxda Beeraleyda Qaaradda ayaa u xilsaartay xarun cusub oo lagu keydiyo baradhada. Maalgashiga mashruucan ayaa gaaray 111,4 milyan UAH. Kaydinta baradhada oo leh aag ka badan 6 ...
Tilmaamaha kaydinta baradhada, kuwaas oo lagu goostay xaalado aad u daran
Mid ka mid ah qodobbada muhiimka ah ee sida tooska ah u saameeya badbaadada dalagga baradhada waa xaaladda baradhada kaydsan. Sida habboon, baradhada waa la goostaa ...